PPSSPP Gold - PSP emulator 1.8.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.8.0 လြန္ခဲ့ေသာ6လက
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု & အက္ရွင္ PPSSPP Gold - PSP emulator
PPSSPP Gold - PSP emulator ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အပို features တွေနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့အဓိပ်ပါယျမှာသင့်ရဲ့ Android device ကိုအပေါ်ကို PSP ဂိမ်း Play!
PPSSPP အန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံး, မူရင်းနှင့်သာ PSP * emulator ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဂိမ်းတွေအများကြီးပြေးပေမယ့်သင့်ရဲ့ device ကို၏တနျခိုးပေါ် မူတည်. အားလုံးအပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာ run မည်မဟုတ်ပါ။
အဘယ်သူမျှမဂိမ်းများကိုဒီကို download နှင့်အတူထည့်သွင်းထားပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အစစ်အမှန် PSP ဂိမ်းကိုပစ်သိမ်းရန်နှင့် .ISO သို့မဟုတ် .CSO ဖိုင်တွေသို့သူတို့ကိုငါလှည့်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးရရှိနိုင်ပါသည်အွန်လိုင်းနေသောအခမဲ့ Homebrew ဂိမ်းများ, play ။ သင့်ရဲ့ SD ကဒ် / USB သိုလှောင်ခန်းအပေါ် / PSP / GAME တွင်သူတို့အားထားပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် http://www.ppsspp.org ကိုကြည့်ပါ။
PPSSPP Gold - PSP emulator အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PPSSPP Gold - PSP emulator အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PPSSPP Gold - PSP emulator အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
india-market စတိုး 49k 21.28M
PPSSPP Gold - PSP emulator ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု & အက္ရွင္ အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း PPSSPP Gold - PSP emulator အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.8.0
ထုတ်လုပ်သူ Henrik Rydgård
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.ppsspp.org/privacy.html
လက်မှတ် SHA1: 73:4A:68:73:FA:A9:A7:FC:59:0C:1B:12:00:44:75:14:CC:E7:D1:19
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Henrik Rydgard
အဖွဲ့အစည်း (O): Unknown
နယ်မြေ (L): Stockholm
နိုင်ငံ (C): SE
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Stockholm
PPSSPP Gold - PSP emulator APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ